Ifayibha yoMthambo yePLC Splitter abavelisi kunye nabaxhasi - China Ifayibha Umthambo PLC Splitter Factory
Ifayibha optic PLC yokuchaka, ekwabizwa ngokuba yiplanar waveguide ciruit splitter, sisixhobo esiphuhlisiweyo sokwahlula ibha enye okanye ezimbini ezikhanyayo zemiqadi yokukhanya ngokufanayo okanye ukudibanisa ukukhanya okuninzi kwemitha enye okanye emibini ukukhanya. Isixhobo esikhethekileyo kwaye sinendawo ezininzi zokufaka kunye neziphumo ezisetyenziswa kakhulu kuthungelwano lwe-optical passive (GPON, FTTX, FTTH).
I-PLC splitter ibonelela ngesisombululo sokuhambisa ukukhanya esinexabiso eliphantsi ngozinzo oluphezulu kunye nokuthembeka, ubuninzi bokugqibela bezinto zokudibanisa zi-1 * 2, 1 * 4, 1 * 8, 1 * 16, 1 * 32, 1 * 64 SC / APC okanye I-SC / UPC.
IJera ibonelela ngefayibha optic yokuchaka intambo kubandakanya:
1) Ifayibha optic PLC Cassette yokuchaka
2) Umdibanisi wekhasethi encinci ye-PLC
3) I-PLC splitter, imodyuli ye-ABS
4) Ifayibha ye-PLC yokuchaka, iBlockless PLC splitter
IJera cassette PLC splitter enentsebenzo engaguquguqukiyo, ilahleko ephantsi yokufaka, ukulahleka okuphantsi okuxhomekeke kwilahleko, ukuthembeka okuphezulu kunye nozinzo, imeko esingqongileyo kunye neempawu zoomatshini, kunye nokufakwa ngokukhawuleza.
Ukujongana nokunyuka okuqhubekayo kweemfuno ze-bandwidth ephezulu, sifuna ukufakelwa okukhawulezayo, i-PLC splitters ethembekileyo yokubonelela ngekhonkco le-fiber optic ngexesha lolwakhiwo lwenethiwekhi ye-FTTX kunye ne-PON. I-splitter ye-PLC ivumela abasebenzisi ukuba basebenzise inethiwekhi enye ye-PON, ikhulisa amandla omsebenzisi wenethiwekhi yefayibha ebonakalayo, kwaye ibonelele ngesona sisombululo sisiso sabakhi benethiwekhi.
Nceda uzive ukhululekile ukuba unxibelelane nathi ngolwazi lwexesha elizayo.
Umatshini wokuqhekeza weKhasi ye-Mini PLC
Ifayibha optic PLC Cassette yokuchaka